I-Victorian Riverside Private Guest Suite - I-Airbnb
I-Victorian Riverside Private Guest Suite
Naburn, England, i-United Kingdom
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Hazel
U-Hazel Ungumbungazi ovelele
Amamayela ayi-5 ukusuka e-York City Center, iNaburn House itholakala enhliziyweni yedolobhana elihle, elingasemfuleni iNaburn. Igumbi lezivakashi linombono wasemaphandleni womfula i-Ouse, nokufinyelela okuqondile osebeni lomfula ophethwe umuntu oyimfihlo. Idolobhana linendawo yokushicilela yendawo, iBlacksmiths Arms, kanye ne-York Marina ene-Waterfront Cafe Bar, iNaburn Locks kanye nomzila womjikelezo weSolar System. Amabhasi agijima njalo aya e-Selby, York Designer Outlet nase-York City Centre.
Idolobhana elinokuthula laseNaburn liyindawo enhle yokubalekela ngemva kosuku lokuphithizela e-York City Centre. Igumbi lezivakashi linekamelo elilodwa elikhulu, elinombhede omkhulu wesitayela se-Victorian, futhi uma abantu abane bengathanda ukuhlala, kunombhede wosuku lwesitayela se-Victorian. Ingadi inokufinyelela okuqondile osebeni lomfula, indawo ekahle yengilazi yewayini kusihlwa njengoba ilanga lishona phezu komfula. Ukhiye we-suite utholakala kusisefo sikakhiye we-masterlock kuvulandi ongemuva. Izinsiza zetiye nekhofi ezinomshini wekhofi we-Nescafe Dolce Gusto nama-pods.
Kukhona indawo yokupaka endaweni, kanye nezindawo eziningi emgwaqeni.
4.98 · 146 okushiwo abanye
IBlacksmiths Arms Pub, York Marina eneWaterfront Cafe Bar, iNaburn Locks lapho isikebhe esihamba ngomkhumbi sima khona ukuze kugibele isikebhe esinendawo enhle ukuya enkabeni yedolobha, umzila weSolar System Cycle ogudla idolobhana usuka eSelby uya eYork, Bishopthorpe phezu komfula ngama-3. izindawo zokudlela, ihhoko lendawo kanye nezindawo zokudlela.
Uma izihambeli zingathanda usizo noma ulwazi mayelana nokuhlala kwazo kanye nendawo yasendaweni ngifinyeleleka kalula kwamakhelwane.
UHazel Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Naburn namaphethelo